के भन्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्यकर्मी ?
बुधवार, जेठ १२, २०७८ प्यार अलि खाँन
जस्तासुकै विपत्तीमा पनि गाउँ गाउँका स्थानीय सरकार जनताका सारथी बनिरहेका छन् । पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनामा पनि स्थानीय सरकारले राहत, उद्धार र उपचारमा देखिने खालको काम गरिरहेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुले जनताको सेवा गरिरहेका छन् । आफ्नो पेशागत समय भन्दा बाहिरी समयमा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरु जनताको सेवामा तल्लिन छन् ।
प्यूठानमा स्थानीय तहमा पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कामले तिव्रता पाइरहेका छन् । जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये माडी क्षेत्रका चार स्थानीय तहले गरेका कामहरुको हामीले पहिलो श्रृखंलामा चर्चा गर्यौ । जनप्रतिनिधीहरुले बनाएका नीति, ऐन, कानुन र विनियोजन योजनाहरुको कार्यसम्पादनमा स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । प्रस्तुत छ प्यूठान क्षेत्र नम्वर १ (ख) मा रहेका पाँच स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग आजको पोष्टकर्मी प्यार अलि खाँनले गरेको कुराकानीको सार संक्षप :
कमलप्रसाद भुसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
गाउँपालिका स्तरीय ५ बेड क्षमताको कोभिड अस्पताल संचालनमा छ । आवश्यकको आधारमा अरु पनि थप गर्ने योजना छ । कोभिड अस्पतालमा एमबिबिएस डाक्टर सेवामा खटिनु भएको छ । दुई जना विरामीलाई अक्सिजन सहितको उपचार पछि निको भएर घर जानुभएको छ । आइशोलेसनमा १ जना विरामीको उपचार चलिरहेको छ । लक्षण देखिएका विरामीहरुलाई अस्पतालमै ल्याएर उपचार गरिरहेका छौँ । अहिले किटको अभाव छैन् । विभिन्न संघ, संस्थाहरुले पनि स्वास्थ्य सामग्री दिने गर्नुभएको छ ।
मानिसहरु परिक्षण गर्न त्रास भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले हामी समस्या भएको ठाउँमा मात्र परिक्षण गर्नेगरेका छौँ । ३ र ६ नम्वर वडामा केही समस्या देखिएकाले गाउँमै पुगेर स्वास्थ्यकर्मीहरुले सेवा दिनुभएको छ । कोभिड देखिएमा अन्य सदस्यको मनोवल घट्नसक्छ भनेर परिक्षण गर्न त्रास गरेजस्तो नागरिकमा देखिन्छ ।
कोरोनाबाट अहिलेसम्म गाउँपालिकामा गाउँमै भएका पाँच जनाको र गाउँपालिकाबासी भएर बाहिरी जिल्लामा हुनुभएकाहरुको मृत्यु भएको छ । बाहिर भएकाहरुको तथ्यांक एकिन छैन् । अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमित ३० जना हुनुहुन्छ । गाउँपालिका अहिलेसम्म सुरक्षित छन् । त्रासको अवस्था छैन् । जनतामा केही मनावैज्ञानिक त्रास देखिएता पनि स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको परामर्शले समाधान भएको छ । औषधी पर्याप्त मात्रामा खरिद गरेर राखिएको छ । कोभिडसँग सम्वन्धित औषधीहरु पनि स्टक छ । किटको अभाव छैन् । आवश्यकता परेमा मगाउन सकिन्छ । ६ वटा विद्युत्तीय अक्सिजन मेशिन छन् । ४ वटा सिलिण्डर छन् । गाउँमा अहिलेसम्म समस्याग्रस्त भन्ने छैन् । जोखिमको पूर्व तयारी पनि गरिरहेका छौँ । जनताको पीडामा स्थानीय सरकार साथमा छ ।
मल्लरानी गाउँपालिका खलंगा प्यूठान
बालकृष्ण थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
५ शैयाँको अस्थायी कोभिड अस्पताल संचालन गरेका छौँ । समस्या परेका जटिल खालका विरामीहरुलाई त्यहाँ उपचार भइरहेको छ । रिफर गर्नेहरुलाई जिल्लामा पठाएका छौँ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एन्टिजिन परिक्षण गर्ने गरेका छौँ । पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई परामर्श गर्ने र औषधी दिने गरेका छौँ । परिक्षण गर्न अनुरोध गर्ने गरेका छौँ । समुदायस्तरमा कोभिड परिक्षण गर्न पुगेका छैनौँ । जटिल समस्या देखियो र टेलिफोन मार्फत जानकारी आएमा पुग्ने गर्छौ ।
जिल्ला आयूर्वेदसँग समन्वय गरेर औषधी र योग अभ्यास जुम बैठकबाट हुने गरेको छ । व्यापक रुपमा त्यस्तो केही गर्न सकिएको छैन् । जिल्लामा भएका अन्य स्थानीय तहहरुसँग जस्तैका गतिविधिहरु भइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले टेलिफोनमा पनि विरामीसँग परामर्श गर्नुहुन्छ । सक्रिय संक्रमित १४० जना हुनुहुन्छ । उपचारपछि निको हुनेहरु ७ जना हुनुहुन्छ । २ जनाको उपचार चलिरहेको छ । गाउँपालिकामा कोभिडले मृत्यु हुनेहरुको संख्या ४ छ ।
गौमुखी गाउँपालिका, लिवासे प्यूठान
सुमन पन्थ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमित २६ जना हुनुहुन्छ । ५ बेड क्षमताको अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना गरेका छौँ । ४ जना विरामीहरु निको भएर घर जानुभयो । अस्पतालबाट ५ जनाले सेवा लिनुभएको छ । ३ वटा अक्सिजन सिलिण्डर छन् । एन्टिजिन किटको परिक्षणलाई गाउँस्तरमा पुगेर गर्ने गरेका छौँ । साविकका सवै वडाहरुका टोलटोलमा पुगेर परामर्श गर्ने, बाहिरी जिल्लाबाट आउनेहलाई होम आइशोलेसनमा बस्ने जस्ता समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम भइरहेका छन् । उहाँहरुलाई स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट परामर्श हुन्छ ।
केही बस्तीहरुमा कोरोना परिक्षण गर्न आनाकानी गर्ने पनि पाइएको छ । तर, हाम्रो परामर्शपछि उहाँहरु परिक्षण गर्ने गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म कोभिडकै कारण १ जनाको मृत्यु भएको छ । समुदायस्तरमा कोभिड फैलिएको छ । भारतीय भूपु सैनिकको एम्बुलेन्स गाउँपालिका क्षेत्रमा छ । तर, गाउँपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स छैन् । भारतबाट आउनेहरु जसलाई चिन्ह र लक्षण देखिएमा कोरोना परिक्षण गर्ने गरेका छौँ ।
नौवहिनी गाउँपालिका बाहाने प्यूठान
अरविन्द्र ब्रह्मा पण्डित, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
५ बेडको आइशोलेसन सेन्टर संचालनमा छ । एमबिबिएस डाक्टरहरु करारमा राखेर सेवा दिइरहेका छौँ । दुर्गमको गाउँपालिका भएकाले पनि हामीहरु वडा वडामा पुगेर कोभिड परिक्षण गरिरहेका छौँ । आइशोलेसनमा भएका विरामीहरुलाई अक्सिजनको समस्या हो, त्यसको व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ । ३ वटा विद्युत्तीय अक्सिजन मेशिन र चार वटा अक्सिजन सिलिण्डर छन् । प्यूठानका विद्युत्ती समस्या छिनछिनमा आउनेजाने हुँदा समस्या छ । त्यसको विकल्पको रुपमा जेनेरेटर राखेका छौ ।
कोभिड अस्पतालमा विरामीहरु आउने क्रम जारी छ । बढी समस्या देखिएका विरामीहरुलाई थप उपचारका लागि बाहिर पनि लैजाने गरेका छौँ । गाउँपालिकाको गाडीलाई कोभिडको विरामीहरुको ओसारपसारमा प्रयोग गरेका छौँ । तर, हामी त्यसलाई एम्बुलेन्सको रुपमा प्रयोग गरेको भनेर प्रचार गरेका छैनौँ ।
बाहिरी संघ, संस्थाहरुले दिने सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छैन् । सिलिण्डरको संख्या १० पुर्याउने तयारीमा छौँ । श्वासप्रश्वासका विरामीहरु पनि अक्सिजनको सेवा लिन आउने गर्नुभएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म गाउँपालिकामा ११३ जना हुनुहुन्छ । परिक्षण धेरैको भएको छ । ४३ जना महिला र ७० जना पुरुष छन् । मृत्यु हुनेको संख्या २ जना छन् । ३१ जना होम आइशोलेसनमा छन् । ५ जना अस्पतालमा उपचाररत छन् । निको हुनेहरुको संख्या ७५ छ ।
गोविन्द घिमिरे, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमित ६७ जना हुनुहन्छ । पोजेटिभ देखिनेहरुको संख्या ३६७ छ । जिल्ला स्तरीय आइशोलेसन केन्द्रमै नगरपालिकाका नागरिकहरुको उपचार चलिहरेको छ । अहिलेसम्म १७ जनाको उपचार भइरहेको छ । कोभिड अस्पतालबाट उपचारपछि निको हुनेहरु पनि हुनुहुन्छ ।
हामी गाउँस्तरमा सचेतना फैलाउने कार्यक्रमलाई जोड गरेका छौँ । नगरपालिका क्षेत्रका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा परिक्षणपछि पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई तथ्यांक पठाउने र उनीहरुलाई स्वास्थ्यकर्मीहरु मार्फत सचेतना दिने गरेका छौँ । महिला स्वयमसेविकाहरु पनि खटिनु भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको सम्पर्क नम्वर सार्वजनिक गरेका छौँ, फोनमा पनि परामर्श दिने गरिएको छ ।
अक्सिजन लेभल ठिक हुनेहरुलाई होम आइशोलेसनमै आराम गर्न भनेका छौँ । नयाँ कामको रुपमा हामी माइकिंग गर्ने र जनचेतना दिने गरेका छौ । यो नगरपालिका बजार क्षेत्रमा पनि भएकाले यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । अहिलेसम्म कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ६ जना छ । कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका विषयमा ठोस योजना माथीबाट आएको छैन् । जोखिम क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यस विषयमा सवैको साथ हुनुपर्छ भन्नेमा हामी आशा गरेका छौँ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु नै विरामी हुनुभयो भने कसले सेवा गर्ने ? स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपाल सरकारबाटै प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले हाम्रो सुरक्षा के ? प्रोत्साहनका कुरा के ? भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न थाल्नुभएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको आत्मवल बढ्ने खालको वातावरण हुनुपर्छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुले जनताको सेवा गरिरहेका छन् । आफ्नो पेशागत समय भन्दा बाहिरी समयमा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरु जनताको सेवामा तल्लिन छन् ।
जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि गाउँ गाउँ भएका स्थानीय सरकार जनताका सारथी बनेर उभिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत साधनमा बोलियो बनाउँ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, जेठ १२, २०७८, ०६:१२:४१
के गर्दैछन् कोभिडमा स्थानीय सरकार ?
मेयरको सहयोग संकलनप्रति समितिकै सदस्यहरु असन्तुष्टि ‘सहयोग उठाउने संस्थागत निर्णय छैन्’